Ngabe Izinja Zingadla Ikhabe? Imithetho Emithathu Yokondla - Ezempilo
Abangane babantu bakaFido bathanda ukudla amakhabe, kodwa kuphephile ukondla ikhabe lenja yakho?
Yebo, ngamafuphi ikhabe liphephile ukuthi lingadliwa yinja yakho; iwusizo ikakhulukazi ekuwagcineni enamanzi ngesikhathi sosuku olushisayo lwasehlobo. Lesi sithelo esikhulu sinezakhamzimba eziningi ezinhle (isb. Amavithamini namaminerali) ezilungele impilo nenhlalakahle yenja yakho. Noma kunjalo, kubalulekile ukwazi:
Ama-Rinds kanye nembewu akufanele kudliwe yinja yakho ngoba kungadala izingqinamba zamathumbu (isb. Isifo sohudo, ukuvinjelwa kwamathumbu kanye nezisu eziphazamisayo).
Ezithathwa ngabaningi njengesithelo esihle kakhulu zigcwele: i-vitamin A, C B6 ne-B1, i-calcium ne-potassium.
Ngokusho koMnyango wezoLimo wase-United States, isithelo esiphundu sinama-calories ayi-50 ngenkomishi (isb. Ucezu olulodwa) njengoba u-92% ungamanzi.
Ngokuzayo amazinga okushisa eqala ukukhuphuka, futhi ufinyelela izithelo zokondla inja yakho, qiniseka ukuthi ubamba ifayili le- ucezu olusha lukaphayinaphu noma ikhabe ukumgcina ethwelwe ngamanzi ngomuthi onempilo futhi omnandi.
Uma uthatha isinqumo sokuphakela i-pooch yakho lesi sithelo esinamanzi, qhubeka ufunda ukuze ufunde mayelana:
Ingakanani Inja Engayidla Inja, futhi,
Yiziphi Izingxenye Zekhabe Okufanele Uzondle Inja Yakho?
Ingakanani Idlozi Engayidla Inja?
Izinzuzo Zezempilo Zenja Yakho
Iziphi Izingxenye Zekhabe Ezingadliwa Yinja?
Ukulungiselela Nokuphaka I-Watermelon Yenja Ukuyidla
Lapho ulungiselela inja yakho lesi sithelo qiniseka ukuthi ususa wonke ugundane, imbewu bese uyisika ibe yizigaxa ezingadluli kukakhilikithi omncane weqhwa.
Kukhona isisho esidala esithi 'kakhulu into enhle' (isb. Ukweqisa kungadala ingozi). Njengabantu sikwazi lokhu kahle kakhulu ngoshokoledi, utshwala nezinye izinto zokudla ezingafuneki. Kodwa ingabe kungalimaza kakhulu inja yakho?
Njengazo zonke izithelo, kunokungalingani kwemvelo kwamaminerali athile nezakhamzimba kuWatermelon. Ikhabe linayo imithamo ephezulu ka-Vitamin A , B6 no-C okusho ukuthi akumele uyincishe njalo inja yakho ngezithelo.
Umbono ongcono ukusebenzisa ikhabe phakathi nezinsuku ezishisayo, ukusiza ukufafaza i-Fido, noma ukulisebenzisa njengomvuzo wokuziphatha okuhle ngesikhathi sokuqeqeshwa.
Ochwepheshe basikisela ukuthi ekudleni kwenja yakho, kuphela i-10% yokusetshenziswa kwekhalori okufanele ize ngokudla noma ukudla okulula. Ngaphezu kwalokho, izithelo nemifino akufanele kube ngaphezu kuka-20% wokudla kwenja. Ekugcineni
Enjeni enesisindo esingamakhilogremu angama-25, kufanele adle amakhalori aphakathi kwama-500 kuye kwangama-750 usuku ngalunye kuya ngeminyaka yawo, umsebenzi womzimba nokuthi ngabe atholwe yini.
Uma ufuna ukuyisebenzisa njengokwelashwa, usebenzisa umthetho ophakeme ongu-10%, kufanele adle ama-calories angu-50 ekhabe ngosuku; okungu-150 amagremu esewonke.
Kodwa-ke, ngemithamo ephezulu kaVithamini A no-B6 lokhu kuzodlula isabelo esinconywayo sikavithamini A (bheka ithebula elingezansi)
Imihlahlandlela Yansukuzonke Yezinja Zokudla
Inja iphakamise ukondleka
(enesisindo esingamakhilogremu angama-25)
Amakholori amashumi amahlanu Amakhalori angama-50 kuya kwangu-75 njengokwelashwa
Uvithamini A 865 ama-micrograms Ama-micrograms angama-380
Uvithamini B6 Ama-milligram ayi-100 Ama-milligram ayi-100
Usayizi osebenza kangcono kungaba okuhumushela cishe ku-50 kuya ku-75 amagremu wekhabe elisha elihlwabusayo.
Uma uthatha isinqumo sokondla ikhabe lenja yakho kufanele ukwenze lokho wazi ukuthi igcwele izakhi zomsoco (okusho amaminerali namavithamini) futhi ayinamafutha.
Esinye sezici ezinhle kakhulu ukuthi sinokuqukethwe kwamanzi okungakanani; ngaphezu kwama-90%! Ngakho ngalezo zinsuku ezishisayo, nini inja yakho ikhefuzela kakhulu , ungaqhubekela phambili ubasize ukuwagcwalisa ngamanzi ngekhabe elisha.
Ngenkathi ingu-92% wamanzi, iyi- i-antioxidant futhi inezakhiwo ezilwa nokuvuvukala ngenxa yeLycopene eyinika umbala wayo obomvu.
Kunamavithamini amabili amakhulu inja yakho ezowathola ngokudla lesi sithelo:
Uvithamini A okuyi-vithamini encibilikiswa ngamafutha esetshenziswa yinja yakho ukuxhasa ukukhula kwamathambo, ukuzala nokubona. Ukushoda kukavithamini A kuholela ekukhuleni okungajwayelekile, ubumpumputhe ebusuku nezinkinga zokuzala.
Uvithamini B6 (i.e. umagazine ) isetshenziswa ekuphenduleni kwamakhemikhali angaphezu kwekhulu emzimbeni wenja yakho ukwakha ama-amino acid asekela amajazi aphilile futhi anciphise ukubola kwamazinyo.
Uma ungakaqiniseki ngesimo saso sokudla okunezithelo ezinhle kakhulu nokunempilo, ibuye ibe ne-minersl ebalulekile njenge-potassium ne-calcium kanye ne-fiber.
Ungayivumeli inja yakho ukuthi idle u-rind noma imbewu ephuma ekhabe njengoba lezi kuyizinto zokuminyaniswa.
Qaphela lapho unika inja yakho lesi sithelo esinamanzi; kunezingxenye ezimbili zekhabe okungafanele zifunziswe inja yakho: i-rind (isb. isikhumba) nembewu (isb.ipips).
Isizathu sokuthi i-rind nembewu ziyingozi ezinjeni yingoba ziyizingozi ezisobala zokuthi ziminyanise futhi inja yakho nayo izoba nobunzima ekuzigayeleni. Ngenkathi imbewu ingadliwa yizinja ezinkulu, ngenxa yamathuba ancishisiwe okuvaleka kwamathumbu, kungcono ukuzigwema zonke ndawonye.
Ngaphambi kokunikeza inja yakho isidlo esinamanzi, qiniseka ukuthi ufunda ithebula elingezansi ukuthola isifinyezo esisheshayo semibuzo yomfundi.
Ukufingqa ukuthi yiziphi izingxenye zekhabe eziphephile lapho inja ingadla khona
Ngabe izinja zingadla isikhumba sekhabe / ikhabe? Cha, kanti ukhamba lwamakhabe alunabo ubuthi enja yakho, kunzima kakhulu ukuthi inja yakho igaye.
Ingabe izinja zingayidla imbewu yekhabe? Cha, imbewu ingadala ukuphazamiseka kwamathumbu; ikakhulukazi ezinjeni ezincane.
Ingabe izinja zingadla ikhabe elisha? Yebo, qiniseka ukusebenzisa umhlahlandlela wokuphakela ngenhla ukuthola usayizi wesabelo ophelele.
Ingabe izinja zingadla ikhabe elifriziwe? Yebo, qiniseka ukusebenzisa umhlahlandlela wethu wokulungiselela ongezansi ukukhiya ukunambitheka!
Uma ngengozi, ubona ukuthi inja yakho ikwazile ukungena kudoti futhi idle imbewu noma ugundane - ungethuki. Uma bekuhlafunile futhi bekugwinyile ukudla, khona-ke uzofuna ukulinda futhi ubheke ukuthi banakho yini ukuvimba kwamathumbu. Uzobona izimpawu ezisobala kungakapheli amahora angama-24 njengokuhlanza nobuthakathaka.
Ngendlela elula kakhulu (ama-cubes amancane amasha) ikhabe kulula kakhulu ukulilungiselela. Bhekisisani le vidiyo , noma landela izinyathelo ezilula eziyisithupha ezingezansi:
Sika kube izingxenye ezimbili ezilinganayo
Beka womabili uhhafu wobuso obuphansi phansi bese ususa isikhumba (isb. Esinamandla)
Sika inyama ibe izingcezu zamasentimitha eyodwa
Yiguqule ngamadigri angama-90 bese usika inyama ibe izingcezu zamasentimitha eyodwa
Dice izingcezu zikanxande zibe ama-cubes
Indlela engcono kakhulu yokondla ikhabe isha futhi ayinashukela ezinyaweni ezincane. Qiniseka ukuthi imbewu iyasuswa ngaphambi kokondla i-pooch yakho. Uma ufuna ukuthola ubuciko obuthe xaxa lapho usebenzisa ikhabe ungaliqandisa.
Ungadla amakhabe afriziwe , esikhundleni sokufaka idayisi / ikhabe ikhabe libeka inkomishi eyodwa egcwele yezingcezu ku-blender. Mane uhlangane nesilinganiso samanzi esingu-1: 1 bese uthele i-smoothie kumathreyi e-ice cube. Friza amahora amabili bese ukhonza.
Ukunikeza inja yakho izithelo eziningi kungaholela kuhudo (isb. Isitulo esivulekile), sesivele sikhulume ngokugwema isikhumba, uqweqwe nembewu.
Izithelo kufanele zenze ingxenye encane kakhulu yokudla kwenja yakho ngokuphatha kwazo nangokudla okulula kwekhalori. Lokhu kuvame ukuzungeza ama-calories angama-50 kuya kwangu-100 ngosuku kuye ngosayizi wenja yakho.
Yebo, ikhabe liyindlela ephephile, yemvelo futhi emnandi kuFido. Kusamele uqaphele lapho umkhokhisa imali. Sebenzisa usayizi wengxenye ngenhla ukunquma ukuthi kungakanani ongakondla ekukhonzeni okukodwa; uhlose usayizi wokuphakela wamagremu ama-50 wezinja ezincane no-64 amagremu wezinja ezinkulu.
Hlala ukhumbula izingxenye zalesi sithelo esihle kakhulu eziphephile ukuthi zingadliwa yinja yakho (isb. Inyama) nalezo ezingekho (isb. Isikhumba, ubende kanye nembewu). Ukugwema isikhumba nembewu kuzonciphisa amathuba okuthi inja yakho ibe nezinkinga zamathumbu.
Khumbula ukuthi kufanele wethule ukudla okusha ekudleni kwenja yakho kancane kancane nasezingxenyeni ezincane, futhi uhlale uzibuka zidla isithelo ukuqinisekisa ukuthi ziyasihlafuna futhi zisigaye kahle.
Ngabe uke wayondla ikhabe lenja yakho esikhathini esedlule, unazo izindlela zokupheka ozithandayo zokupheka izinja usebenzisa lesi sithelo ongabelana nathi? Yabelana nathi nathi esigabeni sokuphawula ngezansi.
Shichon (Teddy Bear Dog) Ulwazi Lokuzala
Yini iMalshi futhi yini okuhle ngabo?
izinhlobo ezihamba phambili zokuhlanganiswa komalusi waseJalimane
i-teacup poodle encane ikhule ngokugcwele
iresiphi ye-castile soap dog shampoo
ingxube ye-australian Shepard blue heeler